5 Tsy maintsy manana fisainana an-tsokosoko an-tserasera
Fandraketana an-dalamby dia fomba amam-pitsipika mahazatra ao anatin'ny ankamaroan'ny orinasan-tserasera Aiza koa raha eny an-tsena dia misy olona afaka mivarotra seza indroa ary miala amin'izany?
Ny mpanamory fiaramanidina manohitra ireo tapakilam-pivarotana azo alaina dia azo fongana amin'ny minitra farany, ka tsy manome fotoana hanangonana seza. Ireo toerana malalaka ireo dia mampiseho ny fidiram-bola very. Ao amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina ara-bola, dia tsy azo ekena izany. Asehony fa manafintohina toy ny faharatsiana izy ireo. Raha betsaka kokoa ny olona manana tapakila nandoavana ny fiaramanidina, dia mitranga izany.
Ity dingan'ny famotsorana malalaka ity dia miseho amin'ny fomba roa. Any Etazonia, ny Departments of Transportation dia mitaky ny seranam-piaramanidina hitady mpiasa an-tsitrapo alohan'ny hanerena olona iray handao ny fanendrena ny seza voafaritra. Fihetsiketsehana iray: ny famporisihan'ireto mpilatsaka an-tsitrapo ireto dia tsy voasoratra ao amin'ny lalàna.
Noho izany dia anjaran'ny mpizahantan'ny tetibola ny manao fifanarahana tsara amin'ny fifanakalozana ny fandefasana ny fahadisoana an-tserasera.
Ireo mpitsoa- ponenana mpiasan'ny tetibola dia mampiasa ireo fahafaha-manao handefa ny dia ho avy amin'ny alàlan'ny asa an-tsitrapo mba handefa fiaramanidina hafa ho takalon'ny fanentanana. Saingy raha omena fahafahana ianao, inona no hataonao? Tadiavo ireo konsily dimy avy amin'ny seranam-piaramanidina alohan'ny hametrahana ny sezanao.
Fihetseham-po mety amin'ny fiaramanidina mahafinaritra
Ny ankamaroantsika dia vonona ny hametraka fotoana maharitra vetivety ho takalon'ny fanonerana. Fa raha mamoaka ny sezany dia mitarika andian-dalitra tsy nahitam-baliny, amin'ny alalan'ny fikasana sy ny ora an-tranomaizina mipetraka ao anaty terminal, tsy mampifaly, ny volavolan-draharahanao an-tsitrapo dia nivadika ho asa mora.
Ny fanontaniana voalohany izay tokony ho an-tsitrapo dia tokony hanontany hoe: "Rahoviana no manaraka ny sidina manaraka izay ahafahako mahazo seza voafaritra tsara?"
Ny valin'io fanontaniana io dia hitarika ny sisa amin'ny resadresakao. Hangataka alalana hiorina amin'ny tsy fitovizanao ianao.
Raha toa ny mpitsoa-ponenana ka miala amin'ny fivoahana manaraka, ary raha ny fehezan-teny hoe "stand-by" dia ampiasaina mba hamaritana ny toeranao misosoka, dia avelao olon-kafa an-tsitrapo mba hikorontana ary hitazona ny seza napetraka aminao.
Vidim-bary sy fialan-tsasatra hafa
Ny fandaniana ora fanampiny an-trano dia midika fa ny fandaniana fanampiny. Azonao atao ny mijanona ao an-trano mihinana sakafo, fa raha tsy izany, any amin'ny seranam-piaramanidina ianao dia misy fiaramanidina mandalo ny sidina.
Ara-drariny ny fidirana ao amin'ny seranam-piaramanidina raha ny faharetan'ny ora roa farafahakeliny. Ny ankamaroan'ireo mpitsoa-ponenana dia hanome voucher izay ekena mora foana ao amin'ny trano fisakafoanana. Ny sasany dia manakana ity tolotra ity raha tsy misy fangatahana azy ireo. Manontany foana.
Mitandrema amin'izay antenainao. Ity dia tsy ho sakafom-pisakafoana mahazatra ao amin'ny trano fisakafoanana dimy kintana. Ny volavolan-dalàna dia azo antoka fa mifanohitra amin'ny salanisan'ny sakafo amin'ny seranam-piaramanidina.
Fitarihana iray hafa mendrika hikaroka dia toerana iray ao amin'ny efitrano fatorian'ny klioba . Ireo toerana ireo dia mahafinaritra kokoa noho ny mipetraka ao anaty terminal. Raha mandany ora maro miandry ny sidina ianao, tsara kokoa ny seza, ary hahita safidy mahafinaritra, gazety, ary televiziona ianao.
Ataovy azo antoka ny fifampiraharahana amin'ireto safidy ireto amin'ny adihevitra voalohany momba ny fisalasalana an-tsitrapo. Ny fametrahana azy ireo amin'ny alàlan'ny fitaovana hafa dia mety hitondra valiny mahavariana.
Fampanantenana vina amin'ny hotely raha ilaina
Tsy toy ny sakafo sy ny lalan'ny klioba no misy ny efitra fandraisam-bahiny, raha toa ka efa nomanina ny andro manaraka. Tsy voatery hatory ao amin'ny terminal ianao . Tahaka ny nataon'ireo gitara sakafo, aza manantena ny hohanina - ho hotely fandraisam-bahiny izay mahafa-po fa tsy manintona.
Ny orinasan-dalambidim-be lehibe dia mitandrina ny efitrano manodidina ny seranam-piaramanidina mba handraisana ireo toe-javatra ireo, ary efa zatra ny fandraisana an-tariby ny seranam-piaramanidina. Hanaovana azy io toy ny karamam-bola.
Raha mety ny fanatanterahana ny fandoavam-bola, ny sasany amin'ireo lafiny hafa amin'ny trano fandraisam-bahiny ao anatin'ireny toe-javatra ireny dia mety tsy mahomby toy izany.
Marina ny manontany ny halavirana izay hodianao avy eny amin'ny seranam-piaramanidina. Raha tsy eo amin'ny tranon'ny seranam-piaramanidina ny hotely, ahoana ny any lavitra any? Ny dingana lava dia manampy amin'ny tsy fahatongavanao ary misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny fifanarahana aminao.
Ankoatra ny salan-kafatra dia tokony hahazo fitateram-bahoaka ihany koa ianao. Indraindray, manana hotely fanatanjahan-tena ilay hotely. Raha tsy izany, tadidio fa voamarina ao amin'ny tolotra ny mpandoa hidy.
Fanamarinana ara-bola mahomby
Ny singa manan-danja amin'ny tsindron'olona an-tsitrapo ho an'ny ankamaroan'ny mpandeha an-trano dia ny habetsahan'ny mandeha maimaim-poana azo alaina. Tsy misy ny toe-javatra roa manapotika roa mitovy, na dia misy hafa maika kokoa noho ny hafa aza.
Tamin'ny Avrily 2017, ny United Airlines dia tsy maintsy nanafaka seza efatra tamin'ny sidina iray avy tany Chicago O'Hare tany Louisville, Ky. Tsy maintsy naka seza efatra avy amin'ny mpandeha efatra ny ekipa iray efatra nilaina tamin'ny fiaramanidina iray hafa avy any Louisville. Niharatsy kokoa ho an'ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina ny mpandeha efa nidina an-dalamby. Fa ny tolotra voalohany ho an'ilay bump dia 400 dolara fotsiny ary efitrano malalaka amin'ny hotely. Tsy misy mpamono. Voarara ny $ 800. Mbola tsy nisy olona liana.
Ny zava-nitranga taorian'izay dia ratsy. Nipoaka ny fiara tsy matihanina iray niaraka tamin'ny mpandeha iray ara-bakiteny notarihana hiala ny fiaramanidina. Ny fandaniana ara-dalàna sy ny dokambarotra ratsy dia lafo raha ampitahaina amin'ny tolotra vitsivitsy amin'ny $ 1,500 ho an'ireo seza ireo.
Ny seranam-piaramanidina dia mila manamboatra olana iray feno habibiana haingana, mangina, ary mora araka izay tratra. Indrisy anefa, ireo mpiasan'ny seranam-piaramanidina sasany dia tsy nahazo alalana hanao ny tolotra mahafinaritra izay mety hisorohana ny trangan-javatra tahaka ny nitranga tany Chicago. Naverin'ny United tato ho ato indray ny fombany .
Ny fangatahana mahatsiravina mandritra ny androm-pifamoivoizana mandritra ny androm-piainana na $ 10,000 amin'ny dian-tongotra maimaim-poana dia tsy azo ihodivirana loatra, na dia ao anatin'ny fotoana maika indrindra aza. Saingy tsy dia manaiky ny handray ny tolotra voalohany amin'ny seranam-piaramanidina. Ny fahafaham-po dia vonona ny ho ambony kokoa.
Eritrereto ny isan'ny ora tsy ahatakaranao. Sarotra ny mametraka ny vidiny an-ora amin'ny fifampiraharahana izay mifanentana amin'ny mpizaha tany tsirairay, nefa mieritreritra izany tahaka izao: mety ho iray loka ny vidin'ny fitsangantsanganana 200 dolara raha mety amin'ny ora iray na roa tolakandro, fa tsy mandany andro iray manontolo mipetraka any amin'ny seranam-piaramanidina ho an'io vidiny io
Zava-dehibe ny hahalalanao raha hohamafisina amin'ny sidina manaraka ianao. Raha toa ianao ka mijanona fotsiny, dia mila vola bebe kokoa ianao manoloana ny fidiranao an-tsitrapo.
Teny iray momba izany fanonerana izany: matetika dia ny fampindramam-bola izay tsy misy afa-tsy amin'ny seripam-piaramanidina ao anatin'ny 12 volana manaraka. Vola isam-bolana no omena amin'ny toe-javatra sasany, saingy tsy izy ireo no fitsipika.
Fomba fitenenana izay ahitana fanonerana hafa
Ny mpandeha sasany dia maniry tombontsoa amin'ny tapakila amin'ny ho avy.
Moa ve ny fandosiranao mandritra ny adiny telo mahery? Angamba ny fanatsarana ny kilasy voalohany dia ho tsara kokoa noho ny vidiny. Ahoana ny momba ny maha-mpikambana ny klioba izay hamela anao hiandry fampiononana eo amin'ny sidina amin'ny taona manaraka?
Ho sarotra ny hametraka sanda amin'ireny fiheverana ireny rehefa mijoro eo am-bavahady ianao. Eritrereto ireo zavatra ireo alohan 'ny handrosoanao an-tsitrapo hiasa an-tsitrapo.
Manana tetikady izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ary manao ny fandoavam-bola handoavana ny seranam-piaramanidina.
Tokony hivezivezy amin'ny seranam-piaramanidina ve ianao?
Ahoana no Hahitana Vidim-panavotana Maimaim-poana?
Fomba hitadiavana ny fifanarahana amin'ny AirFares farany
Fiaramanidina Advantista mialoha
Last-Minute Flights to Europe
Fahatsiarovana mahavariana momba ny sira cutty - farany amin'ny tapakila teatra Fast
The Spectacular Strange of the Rossnowlagh Orange Order Parade
Fomba hahitanao ny varotra farany amin'ny tranom-bola New York
Ny 8 Most Musical Instagrammableable any Etazonia
Mandeha avy any Montréal mankany Québec
Top Spots ho an'ny Camping Near Vancouver, BC
Ny asako: alina roa tany Venice, Italia
Fiaramanidina Southwest Airlines any Karaiba
Ahoana ny fomba hanomanana ny Trip Napa Valley Day
Feno fankalazana ny Paska Albuquerque tamin'ny 2018
Ice Rinks sy Ice Skating ao Vancouver, BC
Fijerin'i Scotland - Loch Lomond sy Trosachs National Park
Tanàna tsara indrindra any Kalifornia
Hetra amin'ny hetra any Memphis sy Shelby